समीक्षा Archives - Page2of2- sailungonline
भाषा कुनै पनि समुदायलाई चिनाउने र बुझाउने महत्वपूर्ण माध्यम हो । भाषासँग सभ्यता, इतिहास, पहिचान, वर्तमान र भविष्य समेत गाँसिएको हुन्छ । यस अर्थमा भाषा मानव जीवनको अमुल्य वरदान पनि हो । आज हामीले बोलिरहेको भाषा हाम्रो ...
यात्रा खोज हो । उत्सुकता हो । र हो, फ्ल्युडिटी वा वाचालपन पनि । यात्राकै दौरान संसारका नयाँ नयाँ भूभाग भेटेथे, औपनिवेशिक समयमा युरोपियनहरुले । संसार निकै अघि बढिसकेको छ, त्यस सुदुर समयभन्दा । तर यात्रिने क्रम जारी छ, वाच...
असल मान्छेको ‘फाटेको मन’
मान्छेको मन त्यति बलियो कहाँ हुन्छ र ? सानै हुरीमा पनि बत्तिन सक्छ । सानै प्रहरमा पनि भत्किन सक्छ । फेरि जोडिन सक्छ । मोडिन सक्छ अनि तोडिन सक्छ । तर समयलाई साक्षी राखी बाटेका मनका डोराहरु त्यति सजिलै कहाँ टुटन सक्छ ? टुट...
सहअस्तीत्वको खोजमा ग्याबा वंशावली
एक समय यस्तो पनि थियो जति बेला जातीय पहिचानको मुद्दाको विषय निकै कसिलो रुपमा सडक देखि सदन सम्म उठेकोे थियो । समय त्यति घर्की सकेको पनि छैन । हिजो जस्तै लाग्छ । तर राजनीतिक धरातलमा उठेका जातिय मुद्दाहरुले सोचे जसरी अवतरण ...
लोक जीवनको बिम्ब ‘तामाङ उखानकोश’
पत्रपत्रिकाहरुमा देखिरहने नाम हो, फुर्पा तामाङ । यो अर्थमा फुर्पा तामाङ तामाङ वाङमयको लागि नयाँ नाम होइन । तामाङ जातिसँग सन्दर्भित अनुसन्धानात्मक लेख, आलेख, विश्लेषण र दृष्टिकोणबाट समाजलाई अग्रगामी दिशातर्फ निर्देश गर्न ...
नेपाली साहित्यिक आकाशमा हाइकु एक स्थापित नाम भइसकेको छ । हाइकु भनेको तिन हरफमा लेखिने जापानी कविताको शैली हो जुन पाँचरसातरपाँच अक्षरको परिधीमा रहेर लेखिन्छ । वि.स. २०१७ सालमा ४५ दिनको जापान वसाई सकेर फर्केपछि वि.स. २०१९ ...